Atlas tattoos, fikrado aad dunida ku leedahay maqaarkaaga | tattooists
Atlas tattoos, fikrado aad ku leedahay aduunka maqaarkaaga
Ma aha Cherry | | Tattoos leh qaabab
Tattooyada loogu talagalay dadka safarka ah ee ugu badan, iyo iyaga oo leh tattoos atlas, waa nidaamka maalinta, yaa ogaanaya haddii sababtoo ah waqtiyadan mugdiga ah Fayrasyada iyo karantiilka uma safri karno inta aan jecelnahay ama si fudud sababtoo ah aad bay u qabow yihiin.
Maqaalkan waxaan ku siin doonaa farabadan fikradaha tattoo atlas si aad ugu dhiirigeliso gabalkaaga xiga ee ku saleysan qariirada., Dhulal iyo xitaa makhluuqayaal la sheego in culayska adduunku dhabarka ku siday. Intaa waxaa dheer, waxaan ku talinaynaa this article kale oo ku saabsan tattoos dhulka Haddii aad sii waddo waxaa lagaa tagay adiga oo doonaya maab badan.
1 Fikrado cajiib ah oo loogu talagalay tattoos atlas
1.1 Atlas map tattoo
1.2 gabal caalami ah
1.3 Atlas Titan Tattoo
1.4 Naqshad yar oo miyir leh oo leh Dhulka
1.5 Khariidad cajiib ah oo dhabarka ku taal
1.6 Tattoo map-ka magaalada
1.7 Aaggaaga maqaarkaaga
1.8 Toorto dhabarka ku leh atlas
2 sawirada tattoo atlas
Fikrado cajiib ah oo loogu talagalay tattoos atlas
Tattoo-yada Atlas waxay ku salaysan yihiin maab, taas oo iyana isku dayaysa in ay ku qabato laba cabbir dhammaan nacasnimada iyo quruxda adduunkeena, Dhulka.. Sida aad qiyaasi karto, waxay leeyihiin fursado badan iyo qaabab nooc kasta ah kuwaas oo ku xirnaan doona dhadhankaaga shakhsi ahaaneed iyo khibradda farshaxankaaga tattoo. Aan aragno dhowr:
Atlas map tattoo
Waxaa laga yaabaa nooca tattoos ee ugu caansan, Tattoo leh khariidad dhabarka ku taal waa mid ka mid ah fursadaha ugu caansan, laakiin maaha mid xiiso leh, oo leh mawduucan. Waxaad dooran kartaa naqshad fudud, kaas oo ku xaddidan qeexidda adduunka iyo wax yar oo kale, doorasho aad u qurux badan oo qarsoodi ah. Dhanka kale, waxaa jira fursado kale oo badan oo cajiib ah, tusaale ahaan, buuxinta dalal kala duwan oo leh midabyo kala duwan, siinta saameyn biyood ama adiga oo ku saleynaya maabyadii hore, sida kuwa Ptolemy, si aad u siiso taabasho ka duwan.
gabal caalami ah
Atlases inta badan waxay ku yimaadaan qaab warqad iyo buug, in kasta oo globes ay door weyn u yihiin dhiirigelinta haddii aad rabto mid ka mid ah tattoosyadan. Tusaale ahaan, aad bay u qabow tahay in lagu sameeyo qaab dhaqameed, sida sawirka sawirka: xariiqyada qaro weyn iyo midabada xoogga leh ee si dhib yar u muuqda ama hooska leh ayaa siinaya taabasho canab ah oo u muuqda mid aad u fiican tattoo this.
Mid ka mid ah halyeeyadii ugu da'da weynaa ee jira, oo aan ka badnayn ama ka yarayn kii Giriigii hore, ayaa sheegay in Zeus uu ciqaabay Titan Atlas si ay culeyska adduun iyo cirku dhabarka ugu qaadaan. Taasi waa sababta ay caado u tahay in lagu matalo adduunka adduunka garbaha, mid ka mid ah naqshadaha ugu quruxda badan ee aad ku soo jiidan karto dhiirigelinta tattoo-gaaga (in kasta oo uu jiro halyeey ku saabsan Atlas oo sheegaya in dhab ahaantii aysan qaadin Miisaanka dhulka iyo hawada sare, laakiin Perseus wuxuu u rogay buurta isku magaca ah ka dib markii uu tusay madaxii go'ay ee gorgon Medusa).
Naqshad yar oo miyir leh oo leh Dhulka
Waxaan sii wadnaa Dhulka, sababtoo ah atlases waxay si sax ah u yihiin taas, si ay u matalaan meeraheena. Naqshadeyntan waxaa lagu kala soocaa mid aad u fudud, laakiin maaha mid qabow taas: Fiiro u yeelo sida istaroogga nabdoon iyo kuwa khafiifka ah, iyo sidoo kale hadhka akhlaaqda leh ee khadadka, u siinayaan tattoo qoto dheer oo ku filan, shaki la'aan wax aad ku xisaabtami karto qaybtaada xigta.
Khariidad cajiib ah oo dhabarka ku taal
Laakiin haddii waxa aad runtii jeceshahay ay yihiin tattoos atlas oo aad u weyn, ma jiraan wax la mid ah khariidad oo haysa dhabarkaaga oo dhan. Dhab ahaantii, meeshan jidhka ku taal waxay ku habboon tahay naqshad noocan oo kale ah, maadaama aad khariidadda ka kordhin karto garabka ilaa garabka. Adiga ayay kugu xiran tahay inaad ka dhigto mid aad u faahfaahsan ama fudud, iyo sidoo kale inaad siiso midab ama ka tagto madow iyo caddaan, ama xitaa calaamadee meelaha sida magaalooyinka, wabiyada, waddooyinka ... ama xitaa safarrada aad leedahay. sameeyey.
Tattoo map-ka magaalada
Inkasta oo atlases ay sida caadiga ah daboolaan meelo aad u ballaaran ama xitaa adduunka oo dhan, Qofna ma dhahayo inaadan ku dhiirigelin karin magaaladaada tattoo soo socda. Waxaad samayn kartaa khariidadda qalalan, oo ku salaysan qalabyada sida Google ama maabyo caan ah, oo xitaa isku dar khariidadaha khariidadaha leh faahfaahinta tilmaame, hadh iyo midab-biyood. Natiijooyinka qaybahan ayaa badanaa ah mid aad u muuqda oo asal ah, gaar ahaan haddii aad ku nooshahay meelo aan khariidadooda la aqoonsan karin jaleecada hore.
Oo annagu kama fogaanayno, macno ahaan, si aan u sii wadno ka hadalka tattoos atlas, maaddaama aaggaaga ama gobolkaagu sidoo kale u noqon karo dhiirigelin aad u wanaagsan qaybtaada xigta. Waxaad dooran kartaa khariidad yar ama dooran kartaa qayb ka weyn, kiis kasta, sirta ayaa ah in la shakhsiyeeyo, ha ahaato naqshad fudud, oo kaliya oo la qeexay, ama mid dooraysa midabyo dhalaalaya iyo xitaa qurxinta El style. Silsilad
Toorto dhabarka ku leh atlas
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa halyeey kale, wuxuu aad uga dhex muuqdaa dhaqamada kala duwan ee adduunka, sida Hinduuga, Ameerikaanka ama Shiinaha., kaas oo sheegaya in miisaanka adduunku uu dhabarka ku sido qool faqiir ah. Xitaa Terry Pratchett, oo ku jira sheeko-yaqaannada riwaayadaha ah ee Discworld, wuxuu xusayaa khuraafaadkan cajiibka ah ee, dabcan, ay dhiirigelin weyn u tahay tattoo. Haddi aad jeceshahay qaadasho waaqici ah, maroojin madadaalo ah, ama maroojin fikradeed, waxay u ekaan doontaa mid weyn.
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshay doorashadan tattoos atlas oo ay kugu dhiirigelisay inaad hesho naqshadaada xigta. Noo sheeg, ma leedahay tattoo la mid ah? Maxaad u malaynaysaa atlases, ma waxaad ka door bidaa khariidad, globe ama qaabka halyeeyga? Ma kula tahay in aanu waynay fikrad xiiso leh oo aan u sheegno?
sawirada tattoo atlas
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Atlas tattoos, fikrado aad ku leedahay aduunka maqaarkaaga
Fuulista tattoos, macnaha kuwa dhagaxyada fuula
Oni tattoos, jinnigii Japan